Incwadi yamahhala ye-SIG - Geofumadas
NgoJuni, 2011 Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS
Mhlawumbi yenye yezona zinto zixabisekileyo kwiimveliso zentetho yeSpanishi phantsi kwesihloko se-geospatial. Ukungabi nalolu xwebhu kumthetho luphulo-mthetho; Masingathethi ukungayihoyi iprojekthi ngaphambi kokuba uyifunde kule nqaku yeGeofumadas.
Kunokwenzeka ukuba imveliso enjengale ayifumanekanga kwindlu yokushicilela kwisiqhelo saseSpeyin, ndiza kucinga ukuba ngaphaya kwexesha; kwaye loo nto izalwe ngombono wokudala umxholo wesigxina kwisifundo sejejethi ekujonganeni nokuziphendukela kwemvelo kunye nengozi yokuxhamla kwi-software ethile. Ngokuqinisekileyo incwadi esixabiseke elungiswe Victor Olaya, ngokubambisana eyaziwa apho bume geospatial ziquka Landon Blake, Miguel Luaces, Miguel Montesinos, Ian Turton kunye Jorge sanz. Nangona Victor Olaya i yeelwimi owabhala kwaye sakhiwa eyahlukeneyo ngemiba yobugcisa kunye obugcisa, oku kubonakala ukuba okusempilweni ngokuhlanganyelana ngale qela ndlela ethile kakhulu, 'Mna phantse ucinge-njengaxa linge geofumando SEXTANTE , ngokuqinisekileyo kwakufuneka kube ngumzuzu omkhulu.
Sibhekisela kuyo IGIS Free BookOlunokuba kakuhle uxwebhu thethwano xa bebhala ngesihloko, ukuphuhlisa intshumayelo, ukwakha inkqubo, ukunika isitulo okanye ukufunda nje okungakumbi Geographic Information Systems.
Akubalulekanga nje kubalulekile kuba ikhululekile, ngenxa yokuba kokufika, ngenxa yokuba yeyethu, kodwa ngenxa yokuba kwixesha apho kwiintsali PowerPoint iintetho, uluntu, iiblogu kunye neziza yokufunda apho ulwazi kwabelwana igalelo kodwa musa ukubethelela ezi gqolo ukwakha amaxwebhu nzima isetyenziswe njengesingqiniso oluqhelekileyo. Le imvelaphi kunye nenkxaso phantsi kwayo yakhiwe le ncwadi iza kunika igunya ekufuneka ithathelwe ingqalelo luluntu ngaphaya ingqiqo wonder ezihlonipha ngokuzenzekelayo.
Ibandakanya 8 kwizahluko 37 imixholo yayisakhiwa ngendlela ingqiqo ubhalo ziquka: izahluko ezibini zokuqala ijolise nemiba yeengcingane nengqiqo njengoko zihamba izahluko yesithathu neyesine siyaqonda ukuba izinto ezininzi sacinga besisazi Construction Geographic Information Systems ibandakanya iinkalo multiple ukuba aye ngaphaya kwikharityhulam kwaye wenze nto umngeni self amazinyo yethu. Ndiyayithanda maxesha manqanaba ezitshayelela kwecandelo ngalinye, ngokusekelwe umxholo oko balindelwe umsebenzisi. Nangona uhlobo loxwebhu ezingafanelekanga imizekelo ziphuhliswe, angalahlekelwa indlela esebenzayo.
Isahluko se-7 sivala kunye neemeko zokusetyenziswa ngokukodwa kwiindawo eziphilayo, ukulawulwa kwengozi kunye nokucwangciswa. Emva koko kwizihlomelo zichazwa ukuba kukho isethi epheleleyo yedata KwiNtaba yaseBaranja, eCroatia, ezo zinokukhutshelwa ngenjongo yokubeka umxholo.
Kwakhona kwizihlomelo i-panorama yesofthiwe esetyenzisiweyo kwi-GIS ngexesha langoku lihlanganiswa. Uhlalutyo olutshanje lweefayili yefestile kunye neyakhethiweyo, eyenziwa, ekubhekiselele kwimeko yabaxhasi be desktop: i-ArcMap, Geomedia, i-Idrisi, i-PCRaster, Mapinfo, Imifanekiso, Erdas Cinga kunye neGoogle Earth. Iprojekti yamahhala iquka gvSIG, Grass, I-GUM ye-Quantum, SAGA, Umoya Wehlabathi, Vula iJUMPy UDig; ngaphandle kokushiya ukuhlaziywa kwabaphathi beenkcukacha, imethadatha, ukupapashwa kwewebhu kunye namathala eencwadi.
Ndincoma ukukhuphela eli xwebhu njengoko ngokuesele i-65 MB- Nangona iprojekthi sinethemba lokuqhubeka nokuhlaziywa. Ukugqiba ukubenza baqinisekise, bhekani ndiyishwankathela isalathisi sephepha le-915 efuna kuphela ikhava efanelekileyo.
I. I siseko
1. Yintoni i-GIS?
2 Imbali yeGIS
3 Iziseko zeCartographic and geodetic
4. Nguwuphi umsebenzi kwi-GIS?
5 Iimodeli zeenkcukacha zendawo
6 Imithombo esemqoka yedatha yendawo
7 Umgangatho weenkcukacha zendawo
9. Ndingayenza ntoni ngeGIS?
10 Iingcamango ezisisiseko zokuhlalutya indawo
11 Imibuzo kunye nemisebenzi yolwazi
12 Iinkcukacha zobume
13 Ukudala izalathisi zama-raster
14 Imephu ye-algebra
15 Ukuhlaziywa kweGeomorphometry kunye nomhlaba
16 Ukuqwalaselwa kwezithombe
17 Ukudalwa kweetekisi
18 Ukusebenza kweJometri kunye nedatha ye vector
19 Iindleko, umgama kunye nemimandla yempembelelo
20 Iinkcukacha ezininzi
21 Uhlalutyo oluninzi
IV. I te knoloji
22 Izicelo ze-GIS njani?
23 Izixhobo zeDesktop
24 Iiseva ezide kunye nabaxhasi. Imephu yeWebhu
25 I-GIS yeselula
26 I-GIS njengezixhobo zokubonakalisa
27 Iingcamango ezisisiseko zokubonakalisa nokubonakalisa
28 Imephu kunye nxi
29 Ukubonakala kwimiqathango yeGIS
VI. Umbutho wezinto
30. I-GIS ihlelwe njani?
31 Izixhobo zoLwazi lweZithuba
VII. Izicelo kunye nezicelo zokusebenza
34. Ndingayisebenzisa njani i-GIS?
35 Uhlalutyo nolawulo
37 Ulawulo lwezixhobo kunye nocwangciso
A. Ukwaziswa kwedatha
B. Ukujonga ngokubanzi izicelo ze-GIS
C. Ngokulungiselela le ncwadi
Khuphela i-Free GIS Book
Funda kabanzi malunga neprojekthi
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Microstation: Iingxaki ngeleta ñ kunye nokuvakalisa
Post Next Iimagazini ze-3, izihloko ze-3Okulandelayo "
Iimpendulo ze-13 "Incwadi ye-SIG yamahhala"
UJOSE LUIS CABRERA IBARGA uthi:
Eyona nto ndifuna ukuba undithumele umyalelo opheleleyo wetafile yembonakalo
jose lopez uthi:
Lungisa ikhonkco lokukhuphela
Iphutha kwikhonkco lokukhuphela
Elsa Morales uthi:
Incwadi epheleleyo kunye ecacileyo. Igalelo elihle kakhulu!
yiyiphi incwadi enhle, ndiyizalise ...
Kulabo bafana nehlabathi le-GIS, ligalelo elikhulu, ukwandisa ulwazi lwethu. Ndiyabonga kakhulu kule ncwadi.
UVictor Olaya uthi:
Ndiyabonga kakhulu ngokunikezela ngokusasazeka kwincwadi! Makhe sibone ukuba ndiyibeka kungekudala ukuze uthenge inguqulo eprintiweyo.
Siyabonga kwakhona kwinqaku
Ndiyilungisile umnxibelelwano kwenye indawo apho ingalayishwa khona
Yifayile ye-62 MB
Ayikho ikhonkco yokukhuphela, ngaba le ncwadi ikhoyo?
I-Aqua LED uthi:
Ndizama ukuyilanda kodwa ndikhuphela ikhonkco le58kb kwi-.zip. Ngaba kukho umntu onenkinga efanayo?
Ndiyabulela isikhokelo saloo ncwadi, ndingena ukuze ndibone oko ndikuthathayo kwaye uncede
EDUARDO NOGUERA VALLEJOS uthi:
Ndifumana umxholo wale ncwadi unomdla kwaye unobungcali, ngamanye amaxesha ndisebenza nge-GIS, ndisebenza neNkqubo ye-ESCGIS ye-ESRI kwaye ndiza kuyisebenzisa kwimibuzo yam. Enkosi nakwizihlobo zam.